Icons dzinogona kubatsira vatengi kufamba-famba muchitoro chepainternet uye kusimudzira maitiro ayo ese. Yakawanda yea icon seti inowanikwa kubva kune vane tarenda vagadziri pasina muripo.
Heino runyorwa rwemahara icon seti ezve ecommerce zvitoro. Mamwe mabheti ndeekutengesa kwepamhepo. Mamwe ndeakasiyana siyana anobatsira. Zvese zvidhori zvakasununguka kuti zvishandiswe muzvirongwa zvewemunhu kana zvekutengesa. Usati washandisa set, ita chokwadi chekutarisa zvirevo zvacho, zvisinei.
Shopicons muunganidzwa we70 yemahara ecommerce icons kubva H2D2, iyo Berlin-based based agency inoshanda nehunyanzvi mukati ruzivo rwevashandisi uye dhizaini nezvitoro zvepamhepo.
Linea Yemahara Iconset
Linea Free Iconset muunganidzwa weiyo 730 vector icons. Kuwedzera kune ecommerce muunganidzwa, iyo seti zvakare ine mifananidzo yakarongedzwa pasi pekutanga, software, miseve, mamiriro ekunze, uye mimhanzi.
Yakavezwa Zvidhori Icons
Heino seti ye12 flat icons kubva Blugraphic. Mifananidzo yacho inouya mune Illustrator vector chimiro.
Yemahara Flat eCommerce Icon Set
Kururamisira Freepik uye yakatumirwa pa Chairo.com, heino seti yezvinyorwa zve50 mune yakatetepa. Iyo seji inovhara nzvimbo dzese dzakakosha dze ecommerce, kusanganisira kutenga ngoro, kubhadhara, uye kutakura.
Shopping uye E-commerce Icons
Heino kuunganidzwa kwe21 kutenga inobatsira uye ecommerce icons neEpic Coders iri Epic PXLS.
Kushambadzira Swifticons Set
Kushambadzira Swifticons Set iunganidzwa ye angangoita 100 icons ine kutengesa dingindira. Iyo mifananidzo inouya mune zvitatu zvitatu: yakarongedzwa, yakazadzwa, uye ine ruvara. Iyo yakazara Swifticon yakaiswa inopfuura ye1,600 icons.
Heino seti ye48 ecommerce uye navigation vector icons pane PixelBuddha. Dhawunirodha uye shandura mu Illustrator, Photoshop, kana Sketch. Iko kuunganidza ndeye mahara nekunyorera.
50 Yemahara eCommerce Icons
Ichi chikamu chine mavara che50 yemahara ecommerce icons kubva kuMiyuki Uchiyama on Dribbble.
Mahara E-Commerce Icon Set
Iyi seti ye50 yakatsanangurwa, ecommerce icons ndeye Grzegorz Teszblr, yakatumirwa pa Behance.
Lynny Icons, muunganidzwa wemifananidzo ye450 mumasere masere, akagadzirwa 1001FreeDownloads.com. Iyo seti ine mifananidzo yemazuva ano ecommerce, zvemagetsi, mamiriro ekunze, nezvimwe.
Heino seti ye18, yemahara, flat ecommerce icons kubva GraphicsFuel. Yakagadzirwa muAdobe Illustrator, zvimisikidzo zvinotyisa uye zvakakodzerwa nemwenje, chena uye mavara emavara.
54 Yemahara E-commerce Icons
Ichi chikamu chemahara che54 ecommerce icons kubva kuVirgil Pana on Dribbble. Iyo seti inosanganisira mifananidzo yekubhadhara, kutakura, kutumira uye nezvimwe.
40 Yemahara eCommerce Icons
Heino seti ye40 yakadudzirwa vector ecommerce icons yakagadzirwa naIgor Boskovic ye PopArt Studio uye yakatumirwa pa Dreamstale.
Pano pane seti yemifananidzo yemari naNick Ohmy yeiyo AIC boka, rakatumirwa pa Dribbble. The dhizaini riri nyore inowedzera chimiro kuburikidza nemuvara.
Iyo Yemahara Flat & Stroke eCommerce Icon Set
Heano mumwe emahara muunganidzwa kubva Freepik uye Speckyboy. Iyi seti ine anopfuura makumi mashanu ecommerce mifananidzo, yakagadzirirwa neushingi, flat-maitiro. Mifananidzo yacho inouya mumafomati eSVG nePNG.
42 Line Shopping Zvikwangwani
Heino seti yeiyo 42 yekutenga icons kubva FreeVectors, yakatumirwa pa CSS Winner blog. Iko kuunganidza kunosanganisira PNG, Photoshop, Illustrator, uye EPS mafomati.
From Brusheezy uye eWebDesign, heino imwe seti yemavhiza icons yezvinhu zvemari.
Ekupedzisira Kubhadhara Icon Set
Kubva Gregoire Segretain, Yekupedzisira Yekubhadhara Icon Set ndeye yakaunganidzwa yakakura yeye ese makadhi ekubhadhara icons kune cheki fomu.
Kubhadhara Nzira Vector Icons
From Dreamstale, pano pane seti ye 24 yekubhadhara veeter zvinhu, inowanikwa muchena kana yakazara mavara. Iyo seti ine nzira dzekubhadhara uye marogo akadai seVisa, MasterCard, PayPal, Amazon, Google Wallet, Skrill, uye Shopify.
Kadhi Icons 2.0
Pano pane seti yemakadhi emakadhi naTim Parker uye yakatumirwa pa Dribbble. Iko kuunganidza kunosanganisira zvitsva zvekubhadhara sarudzo seStripe neBitcoin.
Maitiro Ekushandisa & Kubudirira NeKushambadzira Mashini